Amaphupho ngomgodi – iAfrika
Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi.
Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu.
Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa yimpahla yakhe noma kubikezela ukudlula kukankosikazi wakhe kumbe abantwana abazalayo.
Owesifazane: Uma ephuphe umgodi uchichima lokho kwesinye isikhathi kungaba yibika lokudlula kwakhe emhlabeni noma ukulahlekelwa yimpahla yakhe.
Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha ubona umuntu omaziyo noma osondelene naye eyongena noma engena emgodini lokho kungachaza ukuthi usuku lokuba adlule emhlabeni lusuke selusondele kakhulu ukuba lufike, okungabangwa yingozi, wukugula noma okunye okungaba yimbangela yaleso sehlakalo.
Kuwona wonke umuntu: Uma uphupha usemgodini phansi, kuyinhlanhla uma ungenalutho umgodi futhi kusho ukuthi uzoba nomndeni ojabule nohloniphekile. Uma umgodi ugcwele amanzi, lokho kusho ukuthi izinto ezimbi ziyeza kuwena.
13 thoughts on “Amaphupho ngomgodi”
Kuchazani ukuphupha indlala blanket ulungiselela ukulala emgodini kodwa kwagcina sekulele ingane yakhona
20/06/2021 at 12:13
18/06/2021 at 09:35
Ngphuphe umgodi wethuna ,nebhokisi eceleni
Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngamathuna
Ngiphuphe ngisendlini nabantu beslisa ababili oyedwa kungath ngifike ngaye ..ngibabone sebesembheden ngifikelwe umcabango wokusaba nokungabethembi ngicabange isu lokubaleka ..ngaythola indlela yokbaleka Kodwa lapho ngibalekela khona yindlela ende nj kuluhlaza utshani phambi Kwam angizboni ngifike lapho ngiya khona. Ngibaleka nj ngihamba ngendlela angihlofi otshanin.. ngicela ongangichazela leli phupho
10/05/2021 at 11:35
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngotshani
16/03/2021 at 16:11
bengiphuphe umgodi ongenalutho sengiyitholile incazelo ngasizala ngyethemba inhlanhla ngempela
Ndiphupha isongololo phantsi komendlalo ndilele
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngezilwane-ezihuquzela-ngezisu/
Ngiphuphe simba umgodi wendlu yangasese nabazala bami ngabe kuchaza ukuthini?
Ngiphuphe ngingena emgodini kodwa ngaphuma futhi
26/06/2021 at 08:43
Kusho ukuthini uma umuntu ekuphuphela umba umgodi omude ungasakwazi nokuphuma kuwo aze akutholele usizo bese bekukhipha
Bengifisa ukwazi ukuthi kusho ukuthi ukuphupha wakhe umuzi kanokusho olwandle olwesabekayo ngokujula namagagasi kodwa futhi eceleni kwalendlu kunensimu yemifino kujike ulwandle lubenamandla bese kuvuleka imbobo phansi lonke lingene khona?